Luka 1:57-80 NA-TWI | Biblica
Luka 1:57-80 NA-TWI
Elisabet awo duu so no, ɔwoo ɔbabarima. N’afipamfo ne n’abusuafo tee adɔe a Awurade ayɛ no no, wɔne no nyinaa de anigye dii ahurusi.
Eduu nnawɔtwe no, abusuafo ne adɔfo behyiae sɛ wɔrebetwa abofra no twetia na wɔato no din. Wɔpɛe sɛ wɔde abofra no to n’agya Sakaria.
Nanso ne na kae se, “Dabi! Ɛsɛ sɛ wɔfrɛ no Yohane.”
Wɔka kyerɛɛ no se, “Obiara nni abusua yi mu a wɔfrɛ no saa.” Eyi ma wɔde wɔn nsa yɛɛ nsɛnkyerɛnne bisaa n’agya din a wɔmfa nto abofra no.
Sakaria ma wɔde krataa brɛɛ no na ɔkyerɛw so se, “Ne din de Yohane.” Eyi yɛɛ wɔn nyinaa nwonwa. Amonom hɔ ara, Sakaria tumi kasae bio, na ofii ase yii Onyankopɔn ayɛ.
Wɔn a wɔtee nyinaa ho dwiriw wɔn, na saa asɛm yi trɛw faa Yudea mmepɔw so hɔ nyinaa. Obiara a ɔtee saa nsɛm yi bisaa ne ho se, “Ɛdɛn na abofra yi benyin ayɛ daakye? Ɛda adi pefee sɛ Awurade nsa wɔ ne so.”
Honhom hyɛɛ n’agya Sakaria ma ma ɔhyɛɛ nkɔm se, “Nhyira nka Awurade Israel Nyankopɔn sɛ waba abegye ne manfo. Ɔde Agyenkwa Tumfo a ɔyɛ ne somfo Dawid aseni rebrɛ yɛn, sɛnea ɔnam n’adiyifo kronkron so fi teteete hyɛɛ bɔ sɛ, ɔbɛma yɛn Agyenkwa a obegye yɛn afi yɛn atamfo ne wɔn a wokyi yɛn no nsam no.
“Na wama bɔ a ɔhyɛɛ yɛn agyanom wɔ n’ahummɔbɔ ho no aba mu na wakae n’apam kronkron no, na wakae n’apam kronkron a ɔne Abraham pamee no, sɛ obegye yɛn afi yɛn atamfo nsam no, na yɛasom no a osuro biara nni mu, na yɛn nkwanna nyinaa mu, yɛayɛ kronkron ne atreneefo wɔ n’anim.
“Na wo, akokoaa yi, wɔbɛfrɛ wo ɔsorosoroni no odiyifo efisɛ, wo na wubesiesie ɔkwan ama Agyenkwa no, na wobɛkyerɛ ne manfo ɔkwan a wɔnam bɔnefafiri so nya daa nkwa; na eyinom nyinaa bɛba mu efisɛ, Onyankopɔn mmɔborɔhunu a ɛdɔɔso no, na ɛbɛma hann a efi soro abepue yɛn so ahyerɛn wɔn a wɔte sum ne owu sum mu no so na akyerɛ yɛn kwan akɔ asomdwoe mu.”
Abofra no nyinii na honhom hyɛɛ no ma; ɔtenaa sare so kosii bere a ofitii n’asɛnka adwuma ase.
Read More of Luka 1